भाग्यमानीसँग हुने यी ६ कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? – Waikhari
गृहपृष्ठ ज्योतिष /वास्तु भाग्यमानीसँग हुने यी ६ कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ?
सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन् नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भई राख्दैन । यसै प्रसङ्गलाई लिएर महाभारतमा पनि विदुरले भनेका छन्, यदि कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरू प्राप्त छन् भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ ।
श्लोक यस प्रकार छ स् अर्थाथमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्र अर्थकरी च विद्या षट् जीव लोकेषु सुखानि राजन् ।। अर्थ स् धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो बोल्ने, आज्ञाकारी पुत्र र धन प्राप्त गर्ने विद्या यी ६ कुराले मानिसलाई सुख दिन्छ ।
सुखी जीवनको लागि धन सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । बिना धनको न नाम रहन्छ, न मान सम्मान नै मिल्छ । परिवारको पालन पोषण गर्नको लागि धन सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । आजको समयमा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि पनि धनको जरुरी छ । धन बिना कुनै रोगको उपचार सम्भव छैन । वृद्धावस्थामा पनि धनको ठुलो सहारा चाहिन्छ । यसर्थ मान सम्मान, शिक्षादीक्षा, परिवारको पालनपोषण, र रोग लाग्दा उपचारको लागि धनको अति आवश्यक हुन्छ ।
जीवनमा सदैव सुखी रहनको लागि शरीर स्वस्थ हुनु जरुरी छ । यदि शरीरमा कुनै रोग छ भने तपाईँ राम्रो सँग कुनै पनि काम गर्न सक्नु हुन्न । यस्तो अवस्थामा तपाईँ जीवनका हरेक कुराबाट वञ्चित हुनुहुन्छ । यदि तपाईँमा साना साना रोगहरू छन् भने पनि तपाईँ कुनै काम राम्ररी गर्न सक्नु हुन्न । श्रम नगरी खान पाइँदैन । श्रम गर्नका लागि शरीर स्वास्थ्य हुनु प¥यो । स्वास्थ्य शरीर नै एकप्रकारले सुखी जीवन हो ईश्वरको वरदान हो ।
महाभारतमा महात्मा विदुरले भनेका छन्, सुन्दर श्रीमती हुनु पनि एक प्रकारको सुख हो । कारण घरमा सुन्दर पत्नी हुनाले तपाईँको ध्यान बाहिर भड्किदैन । घरमा श्रीमतीसँग हुने व्यवहारबाट तनाव मुक्त भएपछि तपाइको बाहिरियासँग सम्बन्ध रहँदैन र अनेकौँ समस्याबाट बच्न सक्नु हुन्छ । समयमा घरमा आइन्छ । आपसी छलफल र सद्व्यवहारबाट नै घर परिवार सञ्चालन हुन सक्छ ।
सुन्दर त्यस पछि पनि मीठो बोल्ने श्रीमती पाउनु भनेको सुनमा सुगन्ध हो । त्यो पनि अर्को सुख हो । जसले नम्रता पूर्वक कुरा गरेर परिवारका हर सदस्यलाई सुख राख्न सक्छिन् । यदि नमिठो बोल्ने श्रीमती घरमा छन् भने दिनहू घरमा विवाद भई रहन्छ र घरको वातावरण अशान्त हुन्छ । यस प्रकार कर्कशा श्रीमती हुनेको घरमा न परिवारले सुख पाउँछ न इष्टमित्र आउँछन् न छर छिमेकी । न उनीहरूको सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
वर्तमान समयमा सबैभन्दा ठुलो समस्या सन्तान हो । सन्तान यदि गलत बाटोमा लागे भने यसको दोष बुबा आमालाई पर्न जान्छ । सन्तान विद्वान् हुन भनेको ठुलो सुख हो । त्यसैले सन्तानको उच्च शिक्षाको लागि बाबु–आमाले आप्नो भएभरको सम्पत्ति लगाएर विदेशमा पठाउँछन् । कारण बुढेस कालमा सन्तान एकदम जरुरी हुन्छ । छोरो साथमा भएर पनि कुलतमा लागेको छ भने त्यो भने दुःखको कारण बन्दछ । तसर्थ जसको सन्तान आज्ञाकारी छन् उ सुखी हुन्छ । जसको सन्तान मूर्ख छ कुलतमा लागेको छ उ दुःखी । त्यसैले महात्मा विदुर– भन्छन् सज्जन सन्तान हुने जो कोहीले पनि दुख कहिल्यै भोग्नु पर्दैन ।
पैसा त आउँछ जान्छ यो एक नियम नै हो । कयौँ पटक यस्तो पनि देखिएको छ कि कोही व्यक्ति कुनै दिन धन वान हुन्छ त केही दिनमै पैसा को लागि तड्पि रहेको हुन्छ । कोही मानिस आफ्नो भएको पैतृक सम्पत्ति अनियन्त्रित रूपले खर्च गर्छन् । यस्तो स्थितिबाट बच्नको लागि तपाईँ सँग यस्तो ज्ञान हुनु प¥यो जसले भएको धन नष्ट पनि नहोस् र काम पनि बनोस् । यदि तपाईँसँग पैसा छैन तर कला छ भने तपाईँ त्यसप्रकारका कामहरू गर्न सक्नु हुन्छ । सम्मान पूर्वक जीवनयापन गर्न सक्नु हुन्छ ।